Ny Mahatsara sy Maharatsy ny mifampiresaka ao amin'ny Fiarahana amin'ny any Ivelany Girl
Ny Mahatsara sy Maharatsy ny mifampiresaka ao amin’ny Fiarahana amin’ny any Ivelany Girl
Daty amin’ny any ivelany ny vehivavy dia tsy ny nofy ny olona maro, fa koa tena tanjona. Ny anton’izany dia ny stereotype ny vehivavy any ivelany foana toa tsara, tsara kokoa ary tsara kokoa no izay any an-tanindrazany. Amin’izao fotoana izao, maro ireo fomba mba hahazoana zatra vahiny. Ohatra, dia afaka ny ho mampiaraka ny sampan-draharaha na ny iraisam-pirenena mampiaraka toerana, na afaka na dia mihaona azy mandritra ny diany. Ny olona izay mahafantatra ny fiteny avy any ivelany dia afaka mora foana ny mahazo nahalala misy vahiny no tiany. Na izany aza, raha te-hanana fifandraisana amin’ny any ivelany ny ankizivavy, dia tsy tokony hieritreritra momba ny tombontsoa sy ny fatiantoka toy izany fiarahana izany. Aoka s mahatakatra ny mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka. Interethnic sy ny volon-koditra ny daty efa nisy hatramin’ny fahagola. Izany dia heverina ho malaza hanambady vahiny zazavavy. Na izany aza, na dia ankehitriny aza, na inona na inona niova mifangaro sendikà no tena malaza. Izany dia mazava fa maro ny fanambadiana dia nitombo be tato anatin’ny folo taona. Ny lehibe indrindra dia ny nofy ny ankamaroan’ny ankizivavy no fanambadiana amin’ny hafa firenena. Amin’izao fotoana izao, maro ny tovovavy no mbola manonofy ny ao anatin’ny fanambadiana toy izany. Mihevitra izy ireo fa ny olona avy any ivelany no mahomby kokoa sy tsara-pahaizana, afaka manampy avy hatrany, hamaha ny olana rehetra, ary hitondra azy ireo any amin’ny fairyland ny fitiavana sy ny rendrarendra. Ny lehilahy kosa, mino fa ny zazavavy avy any ivelany dia tsara fanahy kokoa, thriftier, ho tsara fanahy, etc. Fa izany rehetra izany marina ve? Indrisy anefa fa, ianao dia tsy mahita ny misy adihevitra ny valiny na aiza na aiza.
Tsy mora ny mamorona ny fianakaviana sambatra miaraka amin’ny vahiny, fa dia tena izay azo atao. Mazava ho azy, ny dingana ny olom-pantatra sy ny fanorenana fifandraisana lehibe dia tena lava: Fa dia nahoana ny daty voalohany dia heverina ny zava-dehibe indrindra ary ny zava-nitranga mampientam-po. Tokony ho tsaroantsika fa raha ny ankizivavy iray manapa-kevitra ny hitsidika ny firenenao, dia izy no lehibe fikasana. Aoka isika mba hahita izay mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka dia mampiaraka ny vahiny zazavavy. Arakaraka ny mifandray, dia ho moramora kokoa ho mba hahita ny fiteny iombonana amin’ny olona vaovao sy ny mahaliana kokoa ianao dia toa ny vaovao, ny olom-pantatra. Ianao dia hianatra hahatakatra ny filàna sy ny fanirian ny vehivavy hafa. Ny ankizivavy dia tonga avy any aminao satria ianao dia ho mahaliana interlocutor sy fotsiny ny olona tsara. Ny fiarahana amin’ny any ivelany ny ankizivavy, dia hahatakatra ny psikolojia. Izany dia ho mora ho anao ny mamaritra ny tanjon’ny ny zazavavy avy amin’ny minitra voalohany ny fifandraisana na dia saron-tava izy io mahay. Ny fahafantarana ny iray tapitrisa madinidinika, ianao ho afaka mahatakatra ny fihetseham-po ny olona iray, ny tanjany sy ny fahalemeny. Izany vaovao izany dia hanampy mba hahita ny fanalahidy ny fon’ny vehivavy rehetra. Fahasamihafana ara-kolontsaina dia lehibe kokoa noho ny fahasamihafana eo amin’ny fiteny, ny sakafo, na ny fahazarana. Tena fahasamihafana miseho avy any ivelany sy eo amin ny fomba ny olona hahatakatra ny tontolo izao. Tsy afaka ny hahatakatra izany avy amin’ny boky na amin’ny FAHITALAVITRA. Fa raha ianao no mipetraka ao amin’ny firenena vahiny ho ela ny fe-potoana sy nihaona samy hafa ny zazavavy, dia tena afaka hahatakatra ny kolontsaina hafa.
Izany no voalohany ary lehibe indrindra ny olana
Tianao ve ny ankizivavy mba hahatakatra ianao? Mianatra ny fiteniny.
Ny haingana ny tsara kokoa
Fianarana tao an-trano, nanatrika ny fiteny samihafa ao amin’ny antokony, fitsidihana manokana ny fikambanana, ary mifandray amin’ny tompon’ny teny tamin’ny alalan’ny Skype na ny vahiny mampiaraka toerana. Isaky ny firenena dia manana ny toetra ara-kolontsaina sy ny toe-tsaina. Noho izany, tsy maintsy hatao nahalala ny kolontsaina ao amin’ny firenena talohan’ny fanapahan-kevitra amin’ny fifandraisana matotra amin’ny vahiny zazavavy. Angamba, io dia tsy dia manan-danja ao amin’ny fiarahana amin’ny sehatra. Fa avy eo dia tsy maintsy miaina eo anivon ity kolontsaina ity. Ny olana matetika dia t hitranga raha ny tovovavy iray avy ao anatin’i Eorôpa, fa kosa raha toa ka ny mpiara-miasa mipetraka any amin’ny firenena Silamo, dia efa zatra izany. Ny mazava ho azy, miankina be dia be amin’ny olona iray manokana sy ny fomba manaraka ny fomban-drazana tao amin’ny fianakaviana. Raha ny marina, dia afaka manontany momba ny kolontsain’ny firenena hafa sy ny fianakaviana ny fomba amam-panao eo amin’ny sehatra ara-taratasy. Miresaka amin’ny vahiny zazavavy dia tonga ny fotoana, rehefa nilaza izy fa efa ho avy. Misy daty ny zava-nitranga mampientam-po, sy ny daty amin’ny vehivavy avy amin’ny firenena hafa dia be mahafinaritra kokoa. Noho izany, ny fomba hiomanana amin ny fihaonana voalohany. Satria fantatrareo fa ny ankizivavy tonga tsy ho ela, voalohany indrindra, tsy maintsy manomana ny manontolo andro izay haleha, inona ny fampisehoana, sns. Vahiny, indrindra fa Eoropeana, dia tena tia ny mandeha isan-karazany sy ny fitetezam-paritra, ka mandany ny andro toy izao. Raha toa ka lazao aminy fa manana drafitra ho an’ny fialam-boly izay mety ho mahaliana ho anareo roa mino ahy, izy no mankasitraka izany. Miezaha mba hiresaka momba ny tsy miandany ny daty voalohany, ary aza t aoka hafahafa kely mipoitra. Raha toa ianao ka ho azy ny mangina, na unsmiling, dia mendrika ny hitondra tena amin’ny fomba hafa. Raha tsy izany, ny ankizivavy-dia manapa-kevitra fa ny ny fiaraha-monina dia enta-mavesatra ho anao. Izany no ara-dalàna raha toa ka mitsiky nandritra ny daty avy any ivelany zazavavy. Ny tsy fisian’ny tsiky dia azo heverina ho toy malevolence.
Hanomana sy hanome ny vehivavy ny fanomezana kely
Toy izany ny saina dia tena ankasitrahana ny zazavavy rehetra. Fa aza t mampiseho ny fahadisoam-panantenana izy raha tsy t manome anao na inona na inona amin’ny andro ny fivoriana voalohany. Maro ny vehivavy dia t te-handany vola na inona na inona. Raha manao ny tsara fahatsapana momba azy, ary izy anie hanome anao fanomezana ny andro ny ny lasa. Noho izany, raha te-hahita vahiny ny tovovavy ho an’ny mampiaraka, tsarovy ny zavatra iray: ny zazavavy rehetra dia tsy manam-paharoa. Ny toe-tsain’ny vahiny zazavavy avy any grande-Bretagne no samy hafa avy amin’ny fomba fisainana ny tompon-tany Shina. Manantena izahay fa ny daty dia hahomby sy ho tonga amin’ny dingana voalohany amin’ny fanambadiana
Italia Sendra Olon-Kafa Chat Room Tsy Misy Fisoratana Anarana →